အိမ်ဦးနတ်မြွတ်ဟကြေငြာစကား ~ ဂျပန်ပြည်မှပါးသောစာလွှာ . . .
ခေတ်အဆက်ဆက်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကိုမိတ်ဆက်သော တီဗွီအစီအစဉ်လေး
တခုကိုကြည့်မိရင်း အတော်လေးဟောင်းပေမဲ့ နှစ်သက်မိတဲ့သီချင်းလေးတပုဒ်ပါ။
ဂျပန်လို 関白宣言 （かんぱく せんげん）ဖြစ်ပြီး မြန်မာလိုပြန်လျှင်တော့ အိမ်ဦးနတ်
(အိမ်ထောင်ဦးစီး)မြွတ်ဟကြေငြာစကားရယ်ပါ။ အဆိုရှင်ကတော့ သီချင်းစာသားတွေ
ရေးသားခြင်းဖြင့် အထူးနာမည်ကြီးသော きだまさしဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးခေတ်ကသီချင်းမို့
မိန်းမနှင့်ယောကျာင်္း ရင်ဘောင်တန်းလာသော ယနေ့ခေတ်ဂျပန်တွေကြားမှာတော့
အနည်းငယ် ယောကျာင်္းကြီးဝါဒဆန်တယ်လို့ဝေဖန်ခံရပေမဲ့ အဆုံးထိနားထောင်လိုက်
ရင် တမျိုးပြောင်းလဲသွားတဲ့ခံစားချက်ကို ကျမလည်းခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာနားထောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မင်းကို သတို့သမီးအဖြစ် လက်မခံခင် ကြိုပြောထားချင်တာရှိတယ်
ထမင်းဟင်းကိုကောင်းအောင်ချက် အမြဲတမ်းလှအောင်နေ 出来る範囲で構わないから
မင်းမှာလည်း မင်းမှမလုပ်ရင်မဖြစ်တဲ့အရာတွေရှိတာမို့ それ以外は口出しせず黙って俺についてこい
တခြားဟာတွေက ဘာစကားမှမဆို နှုတ်ဆိတ်ပြီး ငါ့နောက်ကလိုက်ခဲ့
မင်းမိဘနဲ့ငါ့မိဘ ဘယ်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အတူတူမို့ အလေးထားပါ
ယောက္ခမနဲ့ယောင်းမ၊ခဲအိုတွေကို လိလိမ္မာမ္မာဆက်ဆံတာ မခက်တဲ့အရာမို့
လူတွေရဲ့အတင်းဖျင်း မပြောနဲ့ နားမထောင်နဲ့
တဦးဦးက စိတ်ပင်ပမ်းဆင်းရဲရမဲ့အရာမဟုတ်တာ သေချာတယ်
မင်းဟာ ငါရှိတဲ့နေရာကို အိမ်ကိုစွန့်ပြီးလာတာမို့ 帰る場所は無いと思え これから俺がお前の家
ပြန်ဖို့နေရာမရှိဘူးလို့မှတ်ပါ ခုကစပြီး ငါဟာ မင်းရဲ့အိမ်ပါ
ခလေးတွေကကြီးပြင်းလာပြီး အသက်ရွယ်ရလာရင် 俺より先に死んではいけない
ဥပမာ နည်းနည်းလေး တရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်
ဘာမှမလိုပါဘူး ငါ့ရဲ့လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး 涙のしずくふたつ以上こぼせ
ချစ်ရတဲ့မိန်းမဟာ ဘ၀တသက်တာ မင်းတယောက်တည်း
မမေ့လိုက်ပါနဲ့ ငါချစ်ရတဲ့မိန်းမဟာ 愛する女は 生涯お前ただ一人 ချစ်ရတဲ့မိန်းမဟာ ဘ၀တသက်တာ မင်းတယောက်တည်း
ယင်းနောက် ကာယကံရှင်အဆိုရှင်ကိုယ်တိုင် ဒီသီချင်းကို ပြောင်းပြန် မိန်းမကြောက်ရ
တဲ့စာသားကိုပြန်ပြောင်းဆိုတာကိုလည်း နားထောင်ကြည့်လိုရင် ဒီနေရာမှာပါ။
Posted in ဖျော်ဖြေရေး
မိုက်တယ်ကွာ။တကယ်ကော အခုခေတ်မှာ အဲ.လိုယောင်္ကျားတွေများများစားစားရှိသေးရဲ.လားမသိဘူးနေယ်။မိန်းမတာဝန်မိန်းမယူ၊ သူကလဲ အိမ်ဦးနတ်တယောက်တာဝန်အပီအပြင်ယူမယ်ဆိုတဲ.သဘောမျိုး
ပြီးတော.လေ အခုခေတ် ဂျပန်အမျိုးသားတွေထဲမှာ အဲ.လို ရှိကြသေးလို.လားဟင်။
ခေတ်ကြီးဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်း ခေတ်နဲ့အတူလိုက်မပြောင်းတတ်တဲ့ ပြီးတော့ ဘယ်ခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေရှိတာမို့ ဂျပန်သို့မြန်မာအမျိုးသား ရှိကြမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ် ：）））
いつも読んでいただき嬉しいです＾＾ 朝一回コメントしましたけど、消えちゃったみたいで、 返事遅くなってすみませんね。 私としてはブログはあまり読まないんです。 ヤフー、新聞のサイトなどを見たりします。 生活情報のような知りたいまたは分からないことがあれば、 GoogleかYahooの中でキーワードで検索したりします。 その方法が1番助かります。 知ってるブログなら Win日本語学校の先生のブログは http://blogs.yahoo.co.jp/winjapn1789/ もみじ学校の先生のは http://blog.livedoor.jp/minminchit/archives/52451268.html 話題になってることやニュースなどと 日本人が良く読むブログまたはサイトは http://www.livedoor.com/ これからもよろしくお願いします。
ဂျပန်မှာ ဖုံးလုပ်လျှင် (၂) ကျမအတွေ့အကြုံ
ဂျပန်မှာ ဖုံးလုပ်လျှင် (၁)
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဦးကို ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ရပ်ကွက်
နေ ပြည်သူတွေက စုပေါင်း လက်မှတ်ထိုး တိုင်ကြားမှုတွေကို အခုထိ အ...
ကာတွန်းစောငို - ဒီထက်တော့ မလျော့နိုင်တော့ဘူး ဟေ့ကောင်ရေ ...
ဒီနေ. ဂျပန်စာ စကားပြောသင်တန်းသွားစရာရှိတာ ကိုယ.်ဘာသာအကြောင်းပြပီး lab ကို မသွားဖြစ်တော.ဘူး။ အခါတိုင်းဆို များသောအားဖြင်. campus ထဲက ကင်တင်းမှာ ...
အစပြိုးထားတာလေးကရှိထားတော့ ကြားထဲမှာ နဲနဲစီဝင်ပြီး၊ပြောပြရတော့မှာပေါ့လေ..။
ဒီတခါက ဟိုအခန်းအနားချီတက်ပွဲရဲ့ အဆက်၊ ပွဲကျင်းပတဲ့အားကစားကွင်းထဲမှာ ...
Number of View: 390 ဆက်စပ်ပို့စ်များ ။ မြသွေးနီရဲ့သူငယ်ချင်းအိုင်ရင်း အိုင်ရင်းရေးသောစာများ (၁) ဆန္ဒနဲ့ဘ၀တစ်ထပ်ထဲကျကြပါစေ။
ထောပတ်ကိတ် လုပ်နည်းကို video file နဲ့ရှယ်ထားတာလေးပါ4days ago